Freedom Burma: Re: [Freedom Burma] New doc: KIA စစ်ခေါင်းဆောင်များသိစေရန်။
Re: [Freedom Burma] New doc: KIA စစ်ခေါင်းဆောင်များသိစေရန်။
DrParchi Parchat commented on Aung Min's post in Freedom Burma
DrParchi Parchat 27 June 19:03
သြော် ... မြန်မာမီဒီယာ တွေ မြန်မာမီဒီယာ တွေ .. အွန်စော တို.မြေ ရောက် ကင်ချီနေ.ရက် များ ကြတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရေးကြပြီးတော့ ... အွန်ဆိုင်း တို.မြေ ရဲ. ရှမ်းချဉ် လေး ကို တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ် .. အွန်ဆိုင်း တို.မြေ က လည်း အွန်စော တို. မြေ လောက် မတိုးတက်ပေ မယ့် သာယာပါတယ်၊ ချစ်စဖွယ် တိုင်းရင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ် ... လွတ်လပ်ရေးကိုလည်း အတူရယူခဲ့ပါတယ် .. တယ်တယ်တယ် ....
Kaung Myat Htun 27 June 12:48
ဟုတ်ကဲ့ ကို Aung Min ကျွန်တော် လည်းဒီကိစ ကိုသိပါတယ်...........သူ တရုတ်ပြည်သွားပြီးမှ ဖြစ်တာပါ.......... ကျွန်တော်တို့ မြစ်ကြီးနားမှာလည်း အမျိုးမျိုးပြောနေကြပါတယ်........အကို ပြောတဲ့ ကိစ လည်းပါ..ပါတယ်.....
ပြီးတော့ ထိုင်းနယ်ပေါမှာ ရှိတဲ့မြန်မာ အတိုက်အခံ တွေကို အပြတ်ရှင်းဖို့ လုပ်တဲ့ ကိစက ရှပ်နီ ရှပ်ဖြူ ပြသနာ မတိုင်ခင်မှာ သွားရောက်ဆွေးနွေးတာ ပါ..........
ထိုင်းနဲ့ပဲ ဆွေးနွေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး............. တရုတ်နဲ့လည်း ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ....... ဒါပေမယ့် တရုတ်နဲ့ပဲ အဆင်ပြေပြီး....... ထိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်............အဘီဆစ် အနိုင်ရရင် ဆိုတဲ့ ကိစ ကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း တကယ်မသိပါဘူး ............ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ အကြောင်းကို အဲ့လောက်ပဲ သိပါတယ်............
Kaung Myat Htun 27 June 12:15
ဟုတ်ပါတယ်............. စစ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားတွေကို အနိုင်ကျင့်ပါတယ်.............. KIA ကို လည်း ကျေးဇူးတင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်.......... အခု ထိ စစ် အစိုးရနဲ့ ပစ်ခတ်လာတာ....... ပြည်သူလူထု တစ်ယောက်ကို မှ အစုံတရာ... ထိခိုက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး........ လို့ ကျွန်တော်သိထားရပါတယ်....... ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာကို ကျွန်တော်မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်.............
Pyae Bhone 27 June 12:15
yin nar ka yar par byar . Kaung taw lal kachin 1 yout par pal.
Aung Min 27 June 12:14
ကောင်မြတ်ထွန်းရေ ဒီတိုက်ပွဲတွေက သိန်းစိန်တရုတ်ကိုသွားပြီးမှဖြစ်တာ။ ရေကာတာ ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ ဒီတိုက်ပွဲတွေကျယ်ပြန့်လာရင် တရုတ်နိုင်ငံက ပါဝင်ပတ်သက်နိူင်အောင် သိန်းစိန်အစိုးရက ကစားလိုက်တာ။ တကယ့် စစ်ရေးမဟာဗျူဟာက ကချင်ဒေသမှာ လက်ရှိအစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်အားလုံး ချုပ်ငြိမ်းရေးဘဲဖြစ်တယ်။ ကိုတို့ နောက်ထပ်ရထားတဲ့ သတင်းတွေရှိသေးတယ် အဲ့ဒါက ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အဘီဆစ် ပြန်နိူင်ရင် ထိုင်းမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကို အပြီးရှင်းမယ် ။ နယ်စပ်လက်နက်ကိုင်တွေကို အပြုတ်တိုက်လိမ့်မယ်။
ရန် မျိုး အောင် 27 June 12:11
Aung Min createdadoc KIA စစ်ခေါင်းဆောင်များသိစေရန်။.
Posted by Freedom Burma at 11:03
[Freedom Burma] ပညာတတ်ပဲ ဖြစ်ချင်ကြတယ် .....
[Freedom Burma] ဓမ္မရိပ် မဂ္ဂဇင်း တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦး...
[Freedom Burma] ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ ဆုံဖို...
Re: [Freedom Burma] ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့တွေ့ ဆ...
[Freedom Burma] ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့တွေ့ ဆုံဖိ...
Re: [Freedom Burma] ကျောက်ဝိုင်းအတွင်း ဆိုင်နံပါတ်...
Re: [Freedom Burma] အဆိုတော် မျိုးကြီး ရွေးကောက်ပွ...
Re: [Freedom Burma] စည်းနှစ်ဘက်ရဲ့ကြား..မင်းမရပ်နဲ...
Re: [Freedom Burma] New doc: KIA စစ်ခေါင်းဆောင်မျာ...
Re: [Freedom Burma] လူကြီးမင်းများ ကျေးဇူးပြု၍
[Freedom Burma] အဲဒါတွေဟာမဂိုးမညေဖာင့် တဲ့အရာတွေပါ...
[Freedom Burma] ဗုံးတွေပေါက်ရင်ဘယ်သူ...
[Freedom Burma] အခုလဲကြည်...
[Freedom Burma] ဒေါ်စု တရားတော်နှင့်ယှဉ်တဲ့ လွတ်လပ်...
[Freedom Burma] New doc: လွတ်လပ်သော ပြည်သူ့ဆန္ဒ အစိ...
[Freedom Burma] စစ်အာဏာရှင်တို့မှ အပြစ်မဲ့ကျောင်းသ...
[Freedom Burma] တစ်သောင်းငါးထောင်ကျော် ဒီအုပ်စုကြီ...
[Freedom Burma] New doc: အကျင့်ဆိုး
[Freedom Burma] ဒီကနေ့၂၇က်နေ့မှာ ၉၀ ခုနှစ်မှ လေးကြ...
Re: [Freedom Burma] လူတွေ တော်တော်များများတွေ့ ပါတ...
[Freedom Burma] လူတွေ တော်တော်များများတွေ့ ပါတယ်။
[Freedom Burma] အလုပ်လုပ်ရာဝယ် အစကသာရယ်အဆုံးထိပင် ...
[Freedom Burma] ငယ်သူဟာနည်းလွဲများဆို အကြီးအကဲများ...
[Freedom Burma] အလိုက်မသိတာတွေရယ် ကိုယ့်ဖို့တော့ကိ...
[Freedom Burma] စည်းနှစ်ဘက်ရဲ့ကြား..မင်းမရပ်နဲ့ကွာ...
[Freedom Burma] နိုင်ငံခေါင်းဆောင်......ခံယူရင်......
Re: [Freedom Burma] ကံကြမ္မာရဲ့ သတို့သမီး
Re: [Freedom Burma] သူရ ဦးရွှေမန်းက မြန်မာနိုင်ငံသ...